1. Elinye lamagosa asebupoliseni "abalungileyo" (okanye achanekileyo) Uncwadi lwangoku
Ndiqale nje Inqanawa yokugqibela, inoveli entsha nekulindelwe kakhulu ngayo IDomingo Villar kunye nomhloli wakhe weVigo U-Leo Caldas njengomntu ophambili. I-Caldas yenye yamapolisa ambalwa kazwelonke endiye ndalandela ngokuzinikela ixesha elide, kuba ndingaphezulu kwegosa lokunyanzeliswa komthetho okanye umphandi ovela kwezinye iindawo zehlabathi. Ndiye ndaphinda ndaphinda ndayibona i-bonhomie yakhe, umsebenzi wakhe olungileyo kunye nokuziphatha okuhle, ubukrelekrele bakhe kunye nendalo yeGalicia, kwangaxeshanye ukusebenza kwakhe kakuhle. Y Ndikhumbule abanye oogxa bam abafanayo. Kubafundi beenoveli zolwaphulo-mthetho abakhetha uku abo banyanisekileyo, bazincamile, abathe tye nabangenakonakala izicaka zomyalelo nobulungisa.
1 UmMelika, isiNorway, isiTaliyane, isiFrentshi kunye nomJamani-waseScotland
2 UMartin Servaz - uBernard Minier
3 UJan Fabel - uCraig Russell
4 UMyron Bolitar -Harlan Coben
5 ULuca Betti -uRomano De Marco
6 IHolger Munch-uSamuel Bjørk
7 U-Leo Caldas-I-Villar yaseDomingo
UmMelika, isiNorway, isiTaliyane, isiFrentshi kunye nomJamani-waseScotland
Zininzi ezinye, kodwa Ndithathe isigqibo ngezi zintandathu. Zonke zivela kuthotho olwamkelweyo kunye nababhali kunye nobuzwe babo. Kwaye umntu akangowamapolisa, kodwa ungumphandi ongahlawulwayo, kodwa ungena kuluhlu lokuba ngomnye wabo banobuntu obuhle, ububele, ubuhlobo, isisa kunye nokuzincama kubahlobo nakwizihlobo zabo. Zonke izabelo iimpawu ezifanayo iNokuba ngabalinganiswa babo kunye nemvelaphi.
yakhe ngokufanelekileyo, ngokuthembeka, ukuzincama ngenxa yeqela labo, abantu babo okanye abahlobo babo, nangona bejike baba zizikrelemnqa ezifana nemeko kaLuca Betti noMarco Tanzi, ipolisa "elilungileyo" kunye nepolisa "elibi" elivela kuthotho lweMilan Negro olusayinwe nguRomano De Marco.
Kwakhona bathambekele kwisizungu kunye nokudandatheka, kwanokudakumbangokuchanekileyo kuba bayaqonda ukuba benyanisekile kwaye banesisa indalo. Kodwa ngokuqinisekileyo zonke zabelana ngesidingo musa ukunikezela kwicala elinomtsalane nelinamandla lobubi bahlala nabo kakhulu. Ewe kunokuba ngumceli mngeni onzima ngakumbi kunokuba ulungile kwinoveli yolwaphulo-mthetho.
UMartin Servaz - uBernard Minier
Umphathi waseFrance Amapolisa aseTououse UMartin Servaz unengxaki ngakumbi kuloo nto ukuxinezeleka kunye nesidingo unyango lobungcali ngexeshana elibuhlungu kakhulu. Yinto ekufuneka ijongane nayo ngexesha leenoveli ezine ukuya kwi Imesis engenanceba ngalo, ngalo mzuzu, kubonakala ngathi akukho ndlela yokuphela.
UBernard Minier wasazisa kuthi Ngaphantsi komkhenkce kwaye siyaqhubeka Isangqa, Musa ukucima isibane y NguNoche. Kwaye ibe yenye yezona zinto zilandelwe kakhulu kuhlobo olo. UServaz uyanconywa ububele (kakhulu mhlawumbi sele enesihloko sokugqibela) kunye nendlela anikele ngayo ngenxalenye elungileyo yozinzo lweemvakalelo emsebenzini wakhe.
Umlo wakhe uyingozi ngakumbi ngokuchaseneyo ne-psychopath engenakoyiswa ebamba abaninzi kwaye imtshutshise engayeki. Kwaye sihlupheka naye ngenxa yentombi yakhe, ngelahleko zakhe nakwakhe umzamo oqhubekayo ekoyiseni uloyiko lwakho, kodwa wenze ngokulungileyo.
UJan Fabel - uCraig Russell
UJan Fabel unjalo UMkomishinala oyiNtloko wamaPolisa aseHamburg. Isiqingatha saseScotland nesiqingatha saseJamani, unazo ezo ziqingatha zilungileyo abelana ngazo nomdali wakhe, umntu onothando waseJamani waseScotsman kunye nepolisa langaphambili UCraig Russell.
UFabel uthe tye ade athethe ngokwaneleyo, ucocekile ngeendlela zakhe kwaye uqinile kodwa uyacingela neqela elimhloniphayo nelimthandayo. Yena, ukubuya, uhlala ehleli zilindelwe kubo kunye nentombi yakhe, esengozini ngaphezu kwesihlandlo esinye. Ude aqhubeke ngokumangalisayo kunye nowayesakuba ngumfazi wakhe, nangona abafundi benokukrokrela ukuba ayicocekanga ingqolowa ngamaxesha ahlukeneyo.
Siyibonile kuphela isiqingatha sokuntenga kanye (apho kungekho) kwinqanaba lobuqu, xa waphosa iinwele ezingwevu ezingalindelekanga emoyeni e-El Señor del Carnaval. Xa ujongene nokulunga okunjalo, mhlawumbi uRussell wamnika ikhefu, esebenzisa ithuba lomkhosi wecarnival eCologne. Kodwa ibonisa ukulawula okunamandla kuzo zonke iimvakalelo zakho, Nabo bethu bafuna ukukuqashela ngento yeqela lakho. Kum yeyona nto ingakhange iphazamiseke.
UMyron Bolitar -Harlan Coben
American Harlan Coben wadala owayesakuba webhola yomnyazi, ezemidlalo kunye nomphandi engahlawulwayo UMyron bolitar kuloo nto umhlobo sonke sifuna ukuba. Awunakho ukucela uvelwano ngakumbi okanye uzimisele ukunceda nokubakhathalela abanye xa benengxaki. Ngapha koko, ngunyana ogqibeleleyo nothando olunikelwe ngokupheleleyo kubazali bakhe. Kwaye eyona nkwenkwe ibalaseleyo kunye nothando kakhulu, ihlala ilungile.
Kodwa eyona nto inomdla kakhulu lulwalamano lothando olungenamiqathango kunye nenkxaso nomhlobo wakhe osenyongweni Phumelela i-lockwood, ngokuchaseneyo, kumnyama kwaye kubonakalisa ububi kwisipili esinye. Ngokudibeneyo azinakoyiswa ngokuncedisana kwaye zezinye zezona zibini zibalaseleyo zoncwadi lwangoku.
ULuca Betti -uRomano De Marco
Iyafana ne ULuca betti kunye noMarco Tanzi. URomano De Marco udale la mapolisa mabini kuthotho UMilan Mnyama yintoni eyakha Ukunyamalala y Isixeko sothuli. Kufuneka ube abantu abalunge kakhulu, kwaye kakhulu ngendlela yase-Italiya, ukugqiba ukunceda iqabane lakho kunye nomhlobo osenyongweni owathi ngenye imini waya kwicala elimnyama wakuqhatha kunye nenkosikazi yakho, kodwa ngubani ophele ehlala esitratweni emva koko intombi yakhe inyamalale.
U-Luca Betti olungileyo akagcini nje ngokuthatha kwaye ancede uTanzi, kodwa kufuneka ajongane naloo mfazi wayesele ethandana naye, kunye nentombi yakhe, kunye neqabane elitsha eliza kwindlu leyo. Inqaku lelo ichukumisa ukunyaniseka kwakhe kwaye wamkela njani ukuba akanakunceda ukuba unje, ngaphandle kobunye ubunzima kunye nokubakho kwesikali kwakhona. Ke ngekhe uncede kodwa uyithande.
IHolger Munch-uSamuel Bjørk
Munch ngulo mkhomishina igqala, ukuqonda, utata olungileyo, umyeni notatomkhulu. Kwaye emsebenzini wakhe uphethe iqela naye uziva umcebisi. USamuel Bjørk waseNorway wenziwa ngo Ndihamba ndedwa y Isikhova iprototype encinci ayibonwanga kwezo ndawo zeNordic zepolisa elithambileyo, elizama ukuthatha awona matyala mabi ngolawulo olukhulu.
Munch ngomnye umzekelo kunye neqabane lakhe eMia Krüger, umhloli omncinci kodwa ongazinzanga ekufuneka abuyele kuye ukuze asebenze. Ke uyayixabisa inzolo yabo.
U-Leo Caldas-I-Villar yaseDomingo
Ngakumbi iGalician kune-octopus ku feira kwaye zilunge ngakumbi kunesonka esityebileyo somhlaba wabo. Kwaye ngomphumo wokungabi nakhaya, ukukhumbula kunye nokubuyela umva oko kuphawula abantu belizwe lakhe. ULeo Caldas naye efanelekileyo, engadinwayo, enomdla kwaye ininzi yesandla sasekhohlo. Kodwa kukwahle kakhulu igourmet, un unyana onikele ingqalelo kwaye ukhathazekile ngoyise kwaye ephawulwe kakhulu kukusweleka kukanina kwangoko. Kwaye ngaphezu kwako konke, wenzakele kakhulu kukwahlukana kwemvakalelo.
Ewe kunjalo Uyamchasa umncedisi weAragon ngaphandle kokuqhekeza okanye umlinganiso, ungananyathiswanga yimbaleki yaseGalicia, kodwa uthembekile, uthembekile kwaye unesisombululo esinamandla, ufumana enye ye ezona zibini zibalaseleyo zohlobo lomthonyama omnyama. Sele benetrilogy yabo kunye Amehlo amanzi, Ulwandle lwarhaxwa y enye Inqanawa yokugqibela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » 1. Elinye lamagosa asebupoliseni "abalungileyo" (okanye achanekileyo)
Udliwanondlebe noDavid Zaplana kunye noAna Ballabriga: Xa impumelelo ifika ezandleni ezine.